Izindatshana zikaNikhil Raj Martech Zone
Imibhalo nge UNikhil Raj
UNikhil Raj unolwazi lweminyaka engu-7 + ku-SEO naku-Digital Marketing. Usebenze ngqo ne Douglas Karr ukuphatha amaklayenti amaningi wesifunda nawesizwe ngokusetshenziswa kwawo kwenjini, kukazwelonke nakwamanye amazwe.
Okungcono Kangakanani Okuthunyelwe Kubhulogi Kukwenza Uthande Ngcono
NgoLwesine, Februwari 28, 2013 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 UNikhil Raj
Kulungile, leso sihloko singadukisa kancane. Kepha ikunakile yakwenza ukuthi uchofoze ubhale okuthunyelwe, akunjalo? Lokho kubizwa ngokuthi yi-linkbait. Asizanga nesihloko esishisayo sebhulogi esinjengaleso ngaphandle kosizo… sisebenzise i-Content Idea Generator kaPortent. Abantu abahlakaniphile basePortent baveze ukuthi umqondo we-generator weza kanjani. Kuyithuluzi elihle eligxila kumasu wokuxhumanisa angama-
Qaphela - I-Google Search Console Iziba I-Longtail Yakho
NgoLwesibili, Januwari 15, 2013 NgoLwesibili, Septhemba 24, 2013 UNikhil Raj
Sithole enye inkinga ehlukile izolo lapho sibukeza ukusebenza kwamakhasimende ethu okusesha injini. Ngithumele futhi ngabukeza okuvelayo futhi ngachofoza idatha kusuka ku-Google Search Console Tools futhi ngabona ukuthi bekungekho ukubalwa okuphansi, ama-zero kuphela nokubala okukhulu. Eqinisweni, uma ubungakholelwa kudatha ye-Google Webmasters, okuwukuphela kwemigomo emihle ebishayela ithrafikhi yigama lomkhiqizo namagama ancintisanayo amaklayenti abekwe kuwo. Kunenkinga, noma kunjalo.
NgoLwesithathu, uDisemba 12, 2012 NgoLwesibili, Septhemba 24, 2013 UNikhil Raj
Ukusetshenziswa Kwenjini Yokucinga yamawebhusayithi aphesheya bekulokhu kuyindaba eyinkimbinkimbi. Uzothola izeluleko eziningi ku-inthanethi kepha akufanele usebenzise zonke izeluleko ozizwayo. Thatha isikhathi sokuqinisekisa imininingwane oyithola ku-inthanethi. Ngenkathi uchwepheshe kungenzeka ukuthi uyibhalile, akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi baqinisile. Icala iphuzu, uHubspot ukhiphe i-ebook entsha 50 SEO & Amathiphu Wewebhusayithi weMarketer Yomhlaba Wonke. Singabalandeli bakaHubspot nenhlangano yethu